घर जानु-आउनुको दुःख – MySansar
घर जानु-आउनुको दुःख
Posted on October 5, 2014 by Salokya
यो वर्ष चाडपर्वमा झण्डै २५ लाख मानिसले काठमाडौँ खाल्डो छाड्ने अनुमान ट्राफिक प्रहरीले गरेको छ। तर घर जान आउन गरिने यात्रा त्यति सजिलो भने हुँदैन। माथिको एउटा फोटो उदाहरण हो। ‘मान्छे मात्र हैन, कुकुरले पनि काठमाडौँ छाडेछ।’, ‘ए, कुकुर पनि लगेछ!’ भने जस्तो सजिलो भने छैन पक्कै। लौ भन्नुस्, कसैले काठमाडौँमा बस्ने घरमा कुकुर पालेको छ र दशैँमा सबै जन्मथलो जाँदैछन् भने कुकुर राख्ने कहाँ? सँगै लैजानै पर्‍यो। अब मान्छेलाई त टिकट नपाएको बेलामा कसरी कुकुर लैजानु फेरि! कम्ता दुःख हुँदैन।
कल‍ंकीमा काठमाडौँ छाड्नेहरुलाई नियाल्दा अर्को पनि एउटा चिज देखियो। धेरैले आफ्नो मोटरसाइकल बसको छतमा चढाई लैजान लागेका रहेछन्।
एक त काठमाडौँमा चोरी होला भन्ने डर। अर्को दशैँको बेला सार्वजनिक यातायातको बिजोग हुन्छ। टीकासिका लगाउन कतै जानु पर्‍यो भने मोटरसाइकलमा सरर जान पाउँदा मज्जै बेग्लै।
काठमाडौँमा दुई पाइला पर जान पनि मोटरसाइकल चढ्ने बानी लागेकाहरुलाई जता जाँदा पनि त्यही चाहिने बानी पर्नु अनौठो पनि होइन है!
दशैँका लागि लाखौँ यसरी बाहिरिएपछि सँधैजसो जाम, धुलोधुँवा र ध्वनि प्रदूषण भइरहने काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य सडकहरुमा फाट्टफुट्ट गाडी चले पनि सडकहरु रित्ता देखिए, सफा देखिए र कानलाई पनि धेरै हदसम्म आराम भयो।
1 thought on “घर जानु-आउनुको दुःख”
मेरो प्यारो काठमाडौँ. सबैइ जना हसिलो मुहार , राम्रो विचार र आपसी मेल मिलाप लिएर औउनुहोस. नराम्रो विचार बानि लाई थानकोट तल्ल को भिर बाट फालेर औउनु होस् है …